Ololli Dharaa fi Diinummaa ABO Irratti Aggaammate Oromoo Dadhabsiisuufi! « QEERROO
February 23, 2017 By Qeerroo in Oduu/News	Leave a comment
Oromoon tokko, Oromiyaan takka. ABOn tokko, Hooggannis tokko. Yaadni kun yaada ummata Oromoo walii-galaati jedheen amana.
« Raadiyoo Simbirtuu ,Gurraandhala 23,2017
SBO: Gurraandhala 24 bara 2017. Oduu, Haala Baqattoota Oromoo Suudaan keessaa irratti gaaffi fi deebii gabaabaa baqataa Oromoo magaalaa Kaartuum jiraatu waliin taasifamee fi Gaaffii fi deebii Artiist Eebbisaa Solomoon -Kutaa 2ffaa. »